Jaangoynta Nooca Sare ee Jaangoynta Soosaarayaasha iyo Soo-saaraha | Kormeer
★ 100% Cudbi
★ Xiritaanka Hook iyo Loop
★ Daboolka milatari ee qaabka ugu sarreeya ee dabaqyada loogu talagalay raggaas oo leh cabirro madax weyn
★ Taajka sare ee fidsan, biil adag oo horay u qalooca, midab u dhigma biilka
★ Koofiyad fidsan oo tayo sare leh oo waara
★ Dhameystiray jillaab la hagaajin karo iyo xiritaanka loop
Macluumaadka ka hooseeya oo kaliya qaabka millatariga ciidan ee qaabdhismeedka sare ah, waxaan caado ka dhignay mid wanaagsan.
Waxyaabaha cudbi Waxyaabaha kale sida ku xusan dalabka iibsadaha.
Cabir 56-60 cm Ama loo habeeyay
Midab cawl Midabka caadiga ah ee la heli karo (Midabbo gaar ah oo la heli karo markii la codsado, oo ku saleysan kaarka midabka pantone)
Astaanta Daabacaadda, Patchwork, Fidinta daabacaadda, 3D daabac, Calaamado isdabajoog ah oo sarreeya ayaa Laheli karaa Fadlan bixi farshaxankaaga, sawirradaada ama tusaalaha asalka ah
★ Ku soo dhawow amarkaaga OEM ee loogu talagalay koofiyadda milatariga ee qaabka sare leh iyo noocyo kale.
Hoos waa noocyadeenna kale ee qaabka millatariga qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka ugu sarreeya loogu talagalay Kalluumeysatada, haddii aad xiiseyneyso, fadlan noo soo dir lambarka lambarka, haddii ay kaa reebayso adiga qaabka ugu habboon ee dabaqadda sare ee millatariga, fadlan noo soo dir magacaaga.
Anagoo ah soo saaraha koofiyadaha xirfadleyda ah, waxaan ka gudubnay shahaadada nidaamka tayada ISO9001 ， Aqoonsiga WRAP iyo qiimeynta kartida shirkadaha ee ay soo saarto Bureau Veritas, oo ah hogaamiye caalami ah qiimeynta waafaqsanaanta iyo adeegyada shahaadooyinka.
Q1: Maxay tahay faa'iidadaada suuqa?
a) waxaynu leenahay oem noocyo badan oo caan ah, sida Wal-Mart, Disney, American BDA ， GAP, TARGET, Warehouse Mountain iwm
b) In ka badan 15 sano oo adeeg caado ah loogu talagalay koofiyadda militariga ee qaabka sare, oo inta badan loo dhoofiyo Kuuriya, Japan, Yurub iyo Mareykanka, waxayna ka heleen faallooyin wanaagsan macaamiisha badan.
c) Qalab casri ah: waxaan leenahay Japanese Tashima Embroidery Machines Japanese "walaal" mashiinka harqaanka iyo qalab kale oo casri ah.
Q2: Badeecada ma la habeyn karaa?
Dabcan! Haddii loo baahdo muunadda daboolka millatariga ee qaabka sare leh, fadlan dir dhammaan nashqadahaaga, waxaan la kulmi doonnaa sicirkaaga bartilmaameedka ah intii suurtagal ah.
Q3: Sidee ku saabsan waqtiga dhalmadaada?
Guud ahaan, waxay qaadan doontaa ugu yaraan 35 maalmood kadib helitaanka lacagtaada hormariska ah. Waqtiga bixinta gaarka ah waxay kuxirantahay walxaha iyo tirada amarkaaga.
S4: Miyaan heli karaa TUSAALO?
Sure, waxaan soo bandhigi karnaa shaybaarro si loo xaqiijiyo Noocyada, Naqshadeynta, Tayada ama wax kasta oo aad u baahan tahay ka hor intaadan soo saarin dalabkaaga. Si kastaba ha noqotee, tijaabooyinka ayaa laga yaabaa inay bixiyaan lacag. Waxaan caadi ahaan ku bixinnaa shaybaarro 7-14 maalmood gudahood ka dib soo saarista shaybaarka lagu heshiiyo.
Hore: Koofiyadaha Koofiyadaha Kubadda Cagta ee Wiilasha
Xiga: Ragga Koofiyad lagu hagaajin karo Snapback Koofiyad
Koofiyad Milatari Milatari
Koofiyadda Booqashada Milatari
Xilliga Jiilaalka Milatariga